Vanoshandisa zvigadzirwa nevatengi uye fekitori - China Vatengi Vanogadzira Vagadziri
1. Kutsetsenura kwakanaka, sutu yekuenderera kwakawanda kudhinda.
2.Kunyatsogadzikana hakuna kuvhara kwemusoro wekudhinda.
3. Rakajeka ruvara rwakafara ruvara gamut kukwana kwakakwana.
4. Kurumidza kuomesa kukwirira kwekunamatira kwakasimba.
Yakakwira Mhando Yekutenderera Sublimation Yekutamisa Sublimation Pepa
* Kukurumidza kuomesa uye kwakanyanya inki kuburitswa.
* Shanda pane ese anodhinda inkjet.
* Yakanakisa kuita kwemavara neanopfuura 95% chiyero chekuchinjisa.
* Yakasiyana zvakasiyana siyana yehupamhi yekusarudza kubva.
* Inogona kushandiswa kupfeka, girazi, jira, makapu, zvedongo, simbi, mureza, DIY magadzirirwo zvichingodaro.